Gary Vaynerchuk Inc 500 Isi Okwu
Were Oge Awa, Lelee Vidio a
Sunday, May 27, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Ekwenyeghi m na anụrụla m okwu ga-adaba na ụzọ anyị si arụ ọrụ na ndị ahịa anyị. Dị ka ọtụtụ ndị ọzọ, m na-asọpụrụ na ụlọ ọrụ ahịa n'ịntanetị, Gary Vaynerchuk na-agaghị ịfụ anwụrụ ọkụ na tiori… ọ na-aggressively etinyere, anwale, na ezi-na-ekiri ya na-eru nso ka online ahịa - na ihe ịga nke ọma.
Nke a bụ okwu okwu n'eziokwu (ịdọ aka na ntị: ụfọdụ okwu rere ure iji mesie ike) nke na-akọwapụta n'ụzọ doro anya etu ụwa si agbanwe na ihe kpatara ị chọrọ iji mee ihe ugbu a dịka nzukọ iji gbanwee ụzọ ị si ere ngwaahịa na ọrụ gị. Ọ bụ naanị oge tupu asọmpi gị eme na ị nweghị ndị ahịa ị ga-ege ntị. Enweghị oge ị ga-egwu na vidiyo a - ọbụlagodi Q&A dị ịtụnanya ma mepee anya gị. Lelee ya!
Lekọta ndị ahịa gị ma jigide ha. Atụmatụ nnweta ga-esiwanye ike, na-eme ka ha dịkwuo oke. Nweghị ike ịsọ mpi ụlọ ọrụ nwere ndị ahịa anụ ọhịa nke na-egosipụta ịdị ukwuu ha kwa ụbọchị. Bụrụ ụlọ ọrụ ahụ na ụlọ ọrụ dị egwu ma ị mụbaa ahịa gị karịa ihe mgbasa ozi ọ bụla nwere ike ịnye.
Tags: gary vaynerchukgụnyere 500Social Media Marketing
Vidiyo: Mgbasa mgbasa ozi mmekọrịta - The Parody